Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment गोही संरक्षणमा माछा मार्ने जाल बाधक ! - Pnpkhabar.com
गोही संरक्षणमा माछा मार्ने जाल बाधक !
चितवन, २० असोज : सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोहीको संरक्षणमा माछा मार्ने जाल पनि ठूलो तगारो बनेको छ । वर्षेनी जाल मुखमा बेरिएर कैयौँ घडियाल मरेका छन् भने कतिपय गोही लामो समय जालमा बेरिएर बाच्न विवश छन् ।
जालसँगै गोहीले फूल पार्ने, बच्चा कोरल्ने र घाम ताप्ने ठाउँको गिटी, ढुङ्गा, बालुवाको उत्खनन् र प्रदुषण थप चुनौती बन्दै गएको छ । मुख्य रूपमा गोही रहेका राप्ती र नारायणी नदी तटीय क्षेत्रमा मानव बस्ती बाक्लो हुँदै जाँदा त्यहाँको फोहर यिनै नदीमा जाने गर्दछ । जसको प्रत्यक्ष मारमा गोही परेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल बताउनुहुन्छ । राप्ती र नारायणी नदीमा हाल १६५ गोही मात्रै रहेका छन् । ती दुई नदीमा हालसम्म प्रजनन् केन्द्रमा हुर्काएर एक हजारभन्दा बढी गोही छाडिसकिएको छ । (रासस)